ဖခင်ကောင်းရဲ့ ချစ်ခြင်မေတ္တာဆိုတာ ဘယ်အချိန် ပေါ်လွင်လာမလဲ? – BurmeseHearts
ဖခင်ကောင်းရဲ့ ချစ်ခြင်မေတ္တာဆိုတာ ဘယ်အချိန် ပေါ်လွင်လာမလဲ?
ဖခင်တစ်ဦး၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာကိုလည်း ဇနီးကို နားလည် ၊ အားပေးကူညီမှု ၊ အိမ်မှုကိစ္စနှင့် သန့်ရှင်းရေးကိစ္စကူနိုင်မှု (ကူညီနိုင်သူအား ခေါ်ပေးထားနိုင်မှု) ၊ ကလေးငိုလို့ အိပ်ရေးပျက်ရတဲ့ညတွေကို သည်းခံနိုင်မှုမှာလည်း ပေါ်လွင်လာပါတော့တယ်။
မီးဖွားပြီးစမိခင်ဟာ ဘာကြောင့် အကူအညီလိုအပ်နေသလဲ?
BurmeseHearts	 Jun 6, 2015 0
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၀)မှ (၂၃)ပတ်အတွင်း
ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားတဲ့ဇနီးကို ဖခင်လောင်းတွေက ဘယ်လို နားလည်ပြုစုမှုမျိုး…
Brief explanation on modern technologies
ကလေးတွေကို ရွတ်တတ်ဖို့ထက် ကျင့်တတ်ဖို့ သင်ပေးပါ
ကလေးသူငယ်တို့တွင် အကျင့်ဆိုးများ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင် တတိယသုံးလမှာ ဘာတွေ ဖြစ်တတ်သလဲ?
ဖခင်နှင့် သားသမီးများ ဘာကြောင့် စိတ်ချင်းဝေးနေလဲ
မွေးကင်းစကလေးရဲ့ အခြေအနေမှန်ကို ဘယ်လိုတွက်ဆမယ်
အခြေခံပညာ ကျောင်းအုပ်ကြီးများကို ကယ်တင်ပါ
လူပျို ၊ အပျိုသင်တန်း မိတ်ဆက်
ရက်ရှောင်၍ အတူနေနည်း အပိုင်း(၂)
မွေးကင်းစ ကလေးများ၏ စက္ခုအလင်း
မိခင်လောင်းများ သိကောင်းစရာ အပိုင်း(၃)